Nafaqo-xumada oo aad kor ugu kacaysa abaarta ba’an ee ka jirta Koonfurta iyo Bartamah Soomaaliya daraaddeed - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Nafaqo-xumada oo aad kor ugu kacaysa abaarta ba’an ee ka jirta Koonfurta iyo Bartamah Soomaaliya daraaddeed
14.06.2011 | Assisting Somalis, General
Xarun lagu Quudiya Caruurta oo ku taala Mareere
Abaar daba-dheer oo ka jirta Koonfurta iyo Bartamah Soomaaliya ayaa sababeysa heerar nafaqo-xumo oo aad u sarreeya taas oo dhalisey in cusbitaalka MSF ee tuulada Mareerey uu ku khasbanaado in uu bukaannada u wareejiyo teendhooyin halkaa ka dhow si loogu dabiibo. Maalmihii la soo dhaafey ayaa MSF waxa ay 122 bukaan ku dabiibeysey barnaamijkeeda degdegga ah ee nafaqeynta bukaan-socodka, tiradaas oo ah ku dhowaad laba-laabka tirada ay waaxdu qaadi karto taas oo culays weyn ku noqotey in shaqaalaha caafimaadka ee cusbitaalka ay bukaannada siiyaan daaweynta ay u baahan yihiin.
Ku dhowaad mid ka mid ah saddexdii carruur ahba waxaa uu qabaa nafaqo-xumo ba’an oo ay ula socoto miisaankiisa oo aad u hooseeya, calaamado geeriyeed iyo cagabarar nafaqo-xumadu keentey.
Nisbooyinka nafaqo-xumadu ee carruurta Soomaaliya ayaa waqtigan laba-laab noqdey dhibaataduna waa ay ka sii dareysaa maalinba maalinta ka dambeysa. Wararkii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in dalagyadu aaney haddana bisha Luulyo soo go’i doonin.
MSF waxa ay sidaa daraaddeed saadalineysaa in ay xaaladdu ka sii dari doonto bilaha soo socda.
Cusbitaalka MSF ee Mareerrey waa mid ka mid ah tiirarka nolosha ee dadka ku nool koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
‘Dadka ayaa u soo safraya 200 kilomitir si ay carruurtooda noogu keenaan maaddaama tas-hiilaadkan uu yahay halka keliya ee ay ku heli karaan daaweyn lacag la’aan ah”, ayaa uu yiri Xuseen, oo ah hoggaamiyaha kooxda caafimaadka ee MSF ee Mareerrey.
Marka laga soo tago wax ka qabashada dhibaatada abaarta, MSF waxa ay sidoo kale wax ka qabaneysaa xaaladaha malaariyada/duumada oo si weyn kor ugu kacay. Toddobaadkii la soo dhaafey in ka badan 250 qof oo qaba duumo ayaa cusbitaalka lagu daweeyey. “Shaqaalaheenna ayaa si adag uga shaqeynaya in ay wax u qabtaan bukaannada tiradoodu ay aadka kor ugu kacdey, waxa aan bukaannada ka soo saarney qaybaha cusbitaalka (waararka) oo waxa aan keenney teendhooyin si carruurta nafaqo-xumadu hayso loogu dabiibo cusbitaalka dhexdiisa’ ayaa ay tiri Karin Fischer Liddle, oo ah Madaxa Ergada MSF.
‘Waxaa aan ku khasbannahay in aan raadinno xalal aan caadi ahayn sida in aan teendhooyin ka dhinac dhisno qaybaha cusbitaalka ee bukaannada la dhigo si aan dadka oo dhan u siinno daryeelka caafimaad ee ay u baahan yihiin, haddii ay tahay daaweynta nafaqo-xumo, duumo/malaariya, ama Qaaxo’, ayaa ay ku soo gabagabeysey hadalkeeda.
MSF waxa ay gobolka ka shaqeyneysey tan iyo 1991-gii iyada oo waqtigan mashaariic ku leh siddeed gobol oo Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ka tirsan. In ka badan 1,400 shaqaale Soomaali ah, oo ay taageerayaan ku dhowaad 100 shaqaale ah oo Nayroobi ku sugan, ayaa bixinaya daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta nafaqo-xumada, daryeel caafimaad iyo taageero la siiyo barokacayaasha, qalliin, iyo sidoo kale biyo iyo sahay gargaar oo la qaybiyo. MSF dowladna kama qaadato maaliyad ay ku maalgeliso mashaariicda ay ka waddo Soomaaliya, dhammaan maaliyaddeeda waxaa ay ka heshaa deeqo shakhsi ah.
Tags: Malnutrition, MSF, primary health, South Central Somalia
Qoraalada kale ee ku saabsan Assisting Somalis